Indlu ethandekayo enamagumbi amathathu okulala 15 min ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguSara
Iqela lakho lonke liyakonwabela ukufikelela ngokulula kwiivenkile ezininzi ezahlukeneyo, iindawo zokutyela kunye nezinto ezinomtsalane ezisuka kweli gumbi liphakathi. Yonwabele le ndlu yanamhlanje esandula ukulungiswa ngokupheleleyo ukuze ikunike indawo yokuphumla kunye nokuhlala umtsalane. Le ndlu ifanelekile kwiiholide zosapho, uhambo lweshishini, okanye indawo yokuphumla yodwa. Ndidale umoya ogqibeleleyo wokwamkela abahambi, ukuze uchithe ixesha elininzi ukonwabela zonke izinto ezinomtsalane ezinokuthi uLima abonelele ngazo!
Eli gumbi linelanga, linegumbi lokulala le-3 lixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho. Ikhitshi ligcwele zonke izinto zokupheka, idinala, isiselo, isixhobo sokuvula ibhotile, iketile yeti, necoffeemaker, njl. njl. Indlu inomatshini wokuhlamba/wokomisa. Ukongeza, isakhiwo sendlu sinomnyango wokubonelela iindwendwe ngemvakalelo eyongezelelweyo yokhuseleko! Ukuba ufuna naluphi na uncedo olongezelelweyo, umamkeli-zindwendwe wam osemhlabeni uya kukuvuyela ukukunceda!
60" HDTV ene-I-Netflix, I-Disney+
Andifumaneki ngokobuqu, kodwa endibambana naye emhlabeni useLima ukuba ufuna naluphi na uncedo. Ukongeza, ndingafumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile ukuba ufuna ukufikelela kum nangasiphi na isizathu.